WAX BADAN KA OGOOW KANSARKA NAASAHA KU DHACA. – Dhakhtar Amiin
WAX BADAN KA OGOOW KANSARKA NAASAHA KU DHACA.
dr amiin May 13, 2019 Uncategorized
Waa xubin jirka kamid ah oo si iskeed ah usameysa koritaan aan caadi ahayn taasi oo keenta unug qaybsame aan la xakamayn karin,kuna faafata qaybaha kale ee jirka una sii marta dheecanada jirka iyo dhiiga.
“waa sida iila macquulsaneed ee aan anigu ugu qeexey Af-Soomaali ahaan kansarka.”
Kansarka naasaha Waa burooyin ku sameysma naasaha waxay ku sameysmi karaan qanjirka caanaha soo siidaaya ama waxay ku sameysmi kartaa buro kansareedkaasi tuubooyinka caanaha soo qaada sidoo kale guud ahaan naaska. qaybihiisa kala duwan ayey ku sameysmi kartaa,
Wuxuuna ku fidi karaa dhamaan unugyada ku hareereysan ama ka agdhaw naaska.
MAXAA SABABA KANSARKA NAASAHA?
Ilaa hada wali lama cadeyn waxa rasmiga ah ee sababa kansarka naasaha,
Lkn dhakhaatiirtu waxa ay cadeeyeen dadka khatarta ugu jira ee uu ku dhici karo kansarkaa,
lkn waxay caddeen la’yihiin sababta uu ugu dhaco kansarkaan dad aan loo calaamadeen in ay khatar ugu jiraan kansarkan. Ama uu ugu dhici waayey dad iyagu u calaamadeysnaa in ay khatar ay ugu jiraan.
YAA KHATAR UGU JIRI KARA IN UU KU DHACO KANSARKA NAASAHA?
Waa dadka ugu badan uu ku dhaco kansarkan marka loo eego ragga oo iyagu in yar oo kamid ah uu ku dhaco
2= DA’DAADA OO WEYNAATA.
In aad weynaato ayaa ka dhigan in aad khatar ugu jirto kansarkan
3= QOYSKAADA QOF KAMID AH IN UU KU DHACAY HADA KA HOR.
Hooyada, walaashaa,eedada hadii uu kansarkan horey ugu dhacay adna waxaa tahay qof uu soo wajihi karo kansarkaan.
4= IN AAD DHAXASHO HIDE-SIDAHA BCA1 ama BCA2.
Hadaad waalidiinta aad ka dhaxasho hide-sideyaashaan waxaad khatar ugu jirtaa kansarkan sababtoo ah dadka ugu badan ee xanuunkan uu ku dhacay ayaa hide-sidehaan yeeshey.
Hadaad ka qaadatay xabadka daawooyin shucaac ahaanta loo qaadto iyana khatar ayaad ugu jirta kansarkan.
hadii aad cayilantahay oo baruurtaadu ay badantahay khatar ayaad adna ugu jirta in aad wajahdo kansarkan.
7= DHIIGA CAADADU IN UU KUU YIMID ADOO YAR.
Hadii dhiiga caadada uu ku yimid adoo da’yar oo ka yar 12 sano khatar ayaad ugu jirtaa in uu kugu dhaco.
8= CAADADU IN AY KUGU DAAHDEY.
In caadada aad heli jirtey adoo ka weyn 55 sano ayaa iyana keeni karta kansarkan.
9= IN ILMAHA KUUGU HOREEYO AAD DHASHO ADOO WEYN
35 sano adoo ka weyn ama la’eg in aad dhasho ilmahaaga ugu horeeya ayaa ah khatar keeni karta kansarkaan.
10= GABADHA AAN WALIGEED DHALIN.
In aadan waligaa dhalmo aadan sameyn ayaa ah khatarka kale oo keeni karta kansarka marka loo fiirsho haweenku caruurta soo dhaley.
11=HAWEENKA QAATA DHEECAANADA PROGESTERON IYO ESTROGEN.
Daawiyinka labadan hormone ka sameysan oo aad iska daaweynso in aad ku saxdo calaamadaha Caado wareerka ayaa iyana keeni karta kansarkan.
In aad qaadato qamriga ayaa iyana ah sabab kale oo khatar ah oo keeni karta xanuunkan.
CALAAMADAHA UGU CAANSAN.
1= Burooyin ku sameysma naaska ama nudaha unugyada.
2= Naas xanuun
3= guduud wareeg ah ku sameysa naaska.
4= barar dhammaan ama qayb ka mid ah naaskaaga.
5= dheecaan naaska kayimaada oo aan ahayn caano.
6= dhiig ka yimaada ibta naaska.
7= si deg-deg ah qaab dhismeedka naaska oo isku badela.
8= buruq ama barar gacanta hoosteeda.
Haddii aad leedahay mid ka mid ah calaamadahan, ma aha macnaheedu in aad leedahay kansarka naasaha. Tusaale ahaan, xanuunka naaskaaga ama buro yar oo kusameysmata naaskaaga waxaa sababi kara caanaha naaska. Hase ahaatee, haddii aad ka hesho naaskaaga ama aad leedahay calaamado kale, waa inaad u tagtaa dhakhtarkaaga si loo baaro iyo baaritaan dheeraad ah.
WAA MAXAY DAAWADA KANSARKA NAASAHA?
daaweynta kansarka naasaha waxa ay ku xirantahay hadba heerka uu yahay kansarkaadu waxaa jirta 5 heer oo lagu cabiro kansarka naasaha heer 1 ilaa heer 5.
DAAWOOYINKA WAXAA KAMID AH
1= QALIIN, NAASKA OODHAN IN MEESHA LAGA SAARO.
2= IN SHUCAAC LAGUGU DAAWEEYO.
shucaac beegsanaya unugyada burada si uu u burburiyo.
3= IN KIIMIKO LAGUGU DAAWEEYO.
Waa daawooyin loo isticmaalayo in uu ay bur-buriyaan unugyada koraya ee kansarka.
4=PROGESTERON IYO ESTEROGEN IN LA BLOCK GAREEYO.
Labadàan hormone ayàa aad ugu badan jirka haweenka waxa ayna dhiiri galiyaan in uu koritaan sameeyo kansarka naasaha marka waxaa la isticmaalaa daawooyin jirka ka yareenaya labadan hormone.
5= DAAWOOYIN BEEGSANAYA BURADA.
Waxaa jira daawooyin si toos ah u beegsanaya kansarka waxaana kamid ah
=Herceptin (trastuzumab) oo ah daawo waxayna joojisa koritaanka burada.
SIDEE UGA HORTAGI KARTAA IN UU KUGU DHACO KANSARKA NAASAHA?
1= in aadan Qamri,sigaar ama jaad aad iska ilaaliso.
2= miisaankaada in aad dhinto oo aad iska ilaaliso cayilka waayo cayilku wuxuu kamid ah waxyaalaha khatar u ahaa in uu sababo kansarka naaska.
3= jimicsi samee maalin walba ugu yaraan asbuucii waa in aad jimicsataa 150 daqiiqo oo jimicsi ah kaliya.
4= Naas nuujinta waa mida ugu mihiimsan ee ka hortagta kansarka naasaha.
Waxaa la dhahaa “dheereenta naas nuujinta waa ka hortag weyn ee kansarka naaska ah”
5= in aad ka dheeraato daawooyinka caadada lagu saxo.
6= in aad ka dheeraaato shucaacyada.
7= in aadan badsan daawooyinka ka hortaga u ah in aad uur qaado.
Haddii aad ku aragto buro aan caadi aheyn oo naaskaaga ku jirta ama agagaarkiisa , ama aad leedahay calaamadaha kale ee kansarka naaska ee aan soo xusey fadlan ka sameeyso ballan dhakhtarkaaga.
In aad horey u ogaato kansarka in aad qabto ayaa qayb weyn ka qaadanaysa daaweeyntaada,
Balse hadii aad xili danbe oo naasku uu kusoo dhacay aad dhakhtar tagto way yaraanaysa xaddigga aad kaga bogsoon karto.
U SHARE gareeya walaalihiin waa mowduuc muhiim u ah nolashadooda ama halkan uga waca asxaabtaada inta ugu muhiimsan.
Dr Mohamed Amen
Previous WAX KA BARRO CAGO-OLOLKA/HURKA
Next 8DA WAQTI EE UGU FIICAN EE BIYAHA LA CABO IYO FAAIIDADA LAGA HELO